Bisikileta ho an'ny fianakaviana eo an-tokotanin'ny OTK-J2 hitondra an-jaza sy alika, bisikileta ho an'ny fianakaviana an-doha OTK-J2 ho an'ny mpamokatra ankizy sy alika, mpamatsy, orinasa - Fahafinaretana fitaterana (Changzhou) Ebike Co., LTD
Ny bisikileta an-tokatrano OTK-J2 ho an'ny fianakaviana mitondra alika
Motera: 36V-250W Batterie: 36V 12.8AH Asehoy: LCD
Max Speed: 25km / h Jiro: LED
OTKARGO J2 dia bisikileta enta-mavesatra mandeha amin'ny herin'ny herinaratra ho an'ny bisikileta an-tanàna, manana toerana ho an'ny ankizy sy fivarotana enta-madinika izy, miaraka amin'ny cargobike azonao entina ny zanakao sy ny biby fiompinao amin'izay tianao aleha. Tsy mila miahiahy momba ny fakana fivarotana na fitsangatsanganana mandritra ny fotoana be atao. Mandeha mamaky tanàna tsy misy ezaka, na mankafy fitsangatsanganana any amin'ny zaridaina na lalan-kely.
Ny fanampiana pedal elektrika sy ny fiovan'ny fitaovana haingam-pandeha SHIMANO 7 dia mamela ny bisikileta mora amin'ny fifamoivoizana. Ny OTKARGO J2 dia tarihinà motera hub tsy misy borosy 250W BAFANG misy sensor sensor ary bateria Samsung Lithium 36V, afaka hainganana hatramin'ny 25km / h. Ny OTKARGO J2 dia mifanaraka amin'ny saika ny mpitaingin-tsoavaly rehetra noho ny zana-tohatra ambany miaraka amin'ny vatan-kazo sy seza azo ovaina.
Ny lay orana dia natao manokana ho an'ny OTKARGO J2, miaro ny zanakao amin'ny orana sy ny rivotra mangatsiaka. Izy io koa dia manolotra fiarovana amin'ny tara-pahazavana mamiratra.
Max.speed 25 km / h (EU) Motor BAFANG 250W Length 2755mm
Transmission Haingam-pandeha 7 Display LCD sakany 680mm
filanjana Steel Battery 36V 12.8AH Haavo 1150mm
notapahiny Famakiana kapila mekanika